Isetshenziswa ukwethula izipho Lokuzalwa - lena isiko enkulu ukuthi ikwenza ujabule, hhayi kuphela usuku lokuzalwa, kodwa futhi ophayo. Kulungile ngakho - okufakaza injabulo emehlweni kumuntu wena ngothando kangaka ekhethiwe noma etandleni tenkhosi yayo abonisa. Futhi Izinsuku zokuzalwa simbonge kakhulu ngokwenzenjalo - abantu abadala, elingafunwa, eqinisweni, isipho kungaba ngcono ukunakekela abantu elula, amazwi omusa futhi unozwelano kubo. Kodwa amazwi amagama, futhi leli holidi kuyiholide. Khumbula ngesikhathi usemncane, nina spoilt by ezahlukene izipho amancane ngezinto ezingelutho ngesicelo conspiratorial "kuphela Mama Musa Tshela"? Yiqiniso, umkhulu nogogo. Manje sekuyithuba lakho pamper babe nezihlobo ezikhulile. Okungenani ngosuku lokuzalwa.
Ngakho ngokuthi ungayinika lokuzalwa kagogo wakhe? Yiqiniso, kungcono kakhulu ukuba ukhethe isipho, esekelwe esimweni nezithakazelo ugogo. Abanye besifazane abangamaRom babesizakala ubudala othanda ukuzibuka ewuchungechunge, nabanye - obumbene noma thunga, abanye ngenkuthalo imicimbi yosikompilo. Ikhumbula okuthandwa intombazane lokuzalwa, kuyoba lula ukuba enze ukukhetha. Futhi-ke, isipho kufanele kube ezifanele futhi ezisebenzayo, okubonisa indlela ozazisa ngayo, uthando futhi kuhloniphe umuntu. Ngokwesibonelo, uma ugogo uyasebenza futhi uthanda ukuza abantu imnike okubhaliselwe isizini yaseshashalazini, ethola ithuba lokwenza kanjalo ukukhetha ukusebenza.
Futhi isipho nogogo lokuzalwa, uma utsandza smarten, ungasebenza tiveta ezinhle izimonyo anti-ukuguga. Believe me, yena uyojabula kakhulu. Njengoba ayengayifundisa bathandile okuthile kusukela izingubo, isibonelo, ihembe nenhle noma ingubo. Kodwa zama pre-ukuhlela esitolo ukuthi uzokwazi ukushintshanisa izimpahla, uma usayizi asifanele. Uma ngempela bengakwamukeli, ungakhathazeki: thatha ngosuku olulandelayo ingalo kukagogo, futhi nalo hamba ukuze ushintshe usayizi. Lolu hambo, kanye izingubo kufaneleka, umuntu osekhulile Ungase futhi ukuletha kumnandi (ungakhohlwa ukuthi ugogo namanje owesifazane, futhi injabulo yezitolo luphambene nakho kwabo).
Uma ucabanga ngalokho ukunikeza ugogo iminyaka engu-70, unake into emangalisayo ezifana lozalo. abantu abaningi kakhulu amadala ziyazithanda nezindaba ukuvela uhlobo lwe, umndeni. Ayathanda ukuba zazi ukuthi ungubani okhokho babo, lokho ezingelwa, kwakukhona phakathi kwabo ngokuzithandela abantu abazanayo noma osesikhundleni, njll Namuhla, kunamabandla amaningi ukuba bafeze lo isithembiso futhi yayala kumiswa isihlahla zozalo ezizindeni ezihlukahlukene, noma ungadala ke yena. isipho esinjalo kwaziswa kakhulu, ikakhulukazi uma ufake kwesihlahla egameni elikhulu ikhalenda, okuzokwenza ukuhlobisa isithombe isihlobo bakho asebekhulile.
Njengoba babulechki njalo uthande ukubukeza izithombe ukubamangaza wakhe ngesimo isithombe Uhlaka electronic lapho ukulayisha izithombe ozithandayo kwakhe, uma ugogo - ukuba sekhaya futhi lukhetha imfudumalo nenduduzo, kungaba ukuzijabulisa wakhe ingubo efudumele Fluffy noma isikhafu, Slippers elithambile, waistcoat eyenziwe imvu uvolo. Umangele indlela yokwenza isipho nogogo lokuzalwa, into ingane efulethini lakhe, isibonelo, unyakazisa isihlalo noma esihlalweni isikhwama ukhululekile. Ungase futhi akhulule ukuphila kwakhe, enikeza cleaner wezindlu noma ukuwasha machine.
Ngokuqinisekile impesheni ozithandayo, njenge bonke abanye, ukhathazeke kakhulu mayelana nesimo sempilo yabo. njalo into yayo, ngakho ayinandaba, kungakhathaliseki ingcindezi noma ubuhlungu emuva. Ngakho-ke, ukukhetha isipho lokuzalwa kwami ugogo, hhayi ukunganakwa tonometer, Ukushisa pad, inkumbulo Foam omatilasi noma imicamelo. Wabuye Akanandaba uya uthole ingubo extra efudumele, ngoba abantu asebebadala umnkantsha kalula ngakho futhi ngokushesha uthole abandayo. Uma othile emkhayeni wakho uyazi ukuluka ngensonto, babiza lo pair sembozo efudumele, elithambile, amasokisi cute noma amasokisi amade, ngesandla wathungela.
Uma izimali uvumele, anganipha isipho esinjalo lwami lwekutalwa ugogo njengoba ithikithi kuya endlini eqashisayo eyayiqhele noma sibhedlela, lapho yena akajabuli kuphela ukuphumula, pobudet ngokwemvelo, kodwa futhi ukuze bathuthukise impilo yabo. Ungakhathazeki, ukukhathazeka kwakho azothinta ngokujulile! Futhi-ke, noma yini isipho sakho, qiniseka ukuthi ahambe isixha kagogo wakhe ozithandayo izimbali kanye nice iposikhadi esiyisikhumbuzo, izici ezenziwe ngesandla.
Isitoreji noma ukudlala? Nansi indlela ongayisho ngayo
Otto Ohlendorf: biography, imisebenzi, impumelelo, imiklomelo namaqiniso athakazelisayo